Hundreds detained in Zimbabwe protests
January 19 2019 01:23 AM
Zimbabwean cleric and activist Pastor Evan Mawarire, right, exits a prison truck as he arrives at the Harare Magistrates Court in Harare yesterday, for a court hearing on subversion charges.
Hundreds of Zimbabweans arrested during anti-government protests were detained yesterday on public order charges, as the United Nations urged an end to a brutal security crackdown and an internet blackout.
The government has said three people died during the unrest that broke out on Monday after President Emmerson Mnangagwa raised fuel prices by 150%. Lawyers and activists say the toll was much higher and that security forces used violence and carried out mass arrests to quell the
In Geneva, The UN human rights office called on the government to halt the crackdown and denounced allegations of “generalised intimidation and
harassment” of protesters.
Authorities have yet to respond to the allegations of a crackdown, but many Zimbabweans believe Mnangagwa – a former Mugabe ally – is falling back on his predecessor’s tactics by using
intimidation to crush dissent.
Referring to allegations of night-time door-to-door searches against demonstrators and beatings by police, UN human rights spokeswoman Ravina Shamdasani said hospital medics had treated more than 60 people for gunshot wounds.